Xildhibaannada golaha Wakiilada Puntland oo lagu wargeliyay in ay saaka soo xaadiraan xarunta Baarlamanka – Puntland Post
Xildhibaannada golaha Wakiilada Puntland oo lagu wargeliyay in ay saaka soo xaadiraan xarunta Baarlamanka
Xoghayaha Baarlamanka Cabdirisaaq Xiddig
Xog-hayaha guud ee golaha Wakiilada dowladda Puntland Cabdirisaaq Xiddig Warsame oo gelinkii dambe ee xalay farriimo u diray mudanayaasha Baarlamanka, ayaa ku wargeliyay in saaka oo Khamiis ah ay soo xaadiraan fadhiga golaha.
Wargelintan ayaa burinaysa fasax saddex maalmood ah oo guddoomiye Dhoobo u diray mudanayaasha golaha wakiilada, kaasi oo ka bilaaban lahaa Khamiista saaka, islamarkaana dib la isugu soo laaban lahaa maalinta Isniinta ah ee todobaadka soo socda.
Sidoo kale, waxay ku soo beegmatay, xilli habeennimadii xalay iska hor-imaad kooban ka dhacay xarunta Baarlamanka, kaasi oo u dhexeeya ciidamo ku sugnaa xarunta iyo ciidamo kale oo halkaasi tegay.
Iska hor- imaadkii xalay, ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay saddex ruux oo midkood shacabyahay, halka ay ku dhaawacmeen, afar kale.
Xarunta Baarlamanka, waxa haatan amnigeeda la wareegay ciidamo isku dhafa oo dowladda ka socda, waxaana halkaasi saqdii dhexe ee xalay laga saaray ciidan horay u joogay, kadib waan-waan ay sameeyeen odayaasha dhaqanka.